Ọnwa + Reader, ngwa ọgụgụ zuru ezu | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Ọnwa + Reader, ngwa ngwa zuru oke
Joaquin Garcia | | ndị na-agụ akwụkwọ, software, mbadamba
N’oge na-adịbeghị anya, agụrụ m n’akụkọ na isntanetị na-adịwanye njọ. Ojiji nke mbadamba na smartphones na-eme ka anyị jiri ngwaọrụ ndị a na-agagharị karịa ndị ọzọ dị ka laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa desktọọpụ. Ọtụtụ n’ime anyị na-eji mbadamba ihe dịka ihe dị mma iji dochie anya eReader ebe ọ bụ na enwere ọtụtụ ngwa iji nwee ike ịgụ ebook, yana inwe ike ịgụ pdf. Mana ole na ole dị adị na-enye anyị ohere ịnweta ahụmịhe ọgụgụ dị ka onye na-agụpụta onwe ya, Ọnwa + Reader Ọ bụ otu n'ime ngwa ndị ahụ, nke na-abụghị naanị na ị na-ahụ ahụmịhe ọgụgụ na mbadamba na nke eReader, kamakwa ọ na-emeziwanye nke ọma.
1 Gịnị bụ ọnwa + Reader?
2 Kedu ihe na-enye Ọnwa + Reader?
3 Ọnwa + Reader na Caliber, ihe ọzọ na-adọrọ mmasị
Gịnị bụ ọnwa + Reader?
Ọnwa + Reader es ngwa ọgụgụ maka gam akporo. Yiri ya na la Aldiko maara nke ọma mana o nwere ọtụtụ ihe dị iche na ya, ya mere ọtụtụ anaghị etinye ha n'otu akpa. Ọnwa + Reader O nwere uzo abuo, nke ozo na nke ozo “Pro”, nke ikpe azu bu ihe dika nke mbu, ya na ufodu ihe mgbakwunye na nkwado nke n’eme ka ekwue ya ugwo; versiondị nkịtị bụ n'efu. Otú ọ dị oké mmewere nke Ọnwa + Reader bụ na nzube ya bụ iji tụnyere mbadamba nkume ahụ na eReader ma ghara ịgbanwe mbadamba nkume ahụ na eReader na ọ bụ ezie na ọ dị ka ọ bụ otu ihe ahụ, ha bụ ihe dị iche iche.
Kedu ihe na-enye Ọnwa + Reader?
Ọnwa + Reader bụ ngwa a sụgharịrị n'ihe karịrị asụsụ 40, bụ n'efu ma na-enye ohere ịgụ ọtụtụ usoro ebook, gụnyere nke kachasị ọhụrụ epub3. Ọ na-enye anyị ohere ịhazi ọtụtụ ihe dịka font ụdị, spacing, font size, akara spacing, wdg…. Ihe ọzọ dị mkpa ọ na-eweta Ọnwa + Reader Na ọ bụghị ngwa niile na-eweta ya, ọ bụ ọnọdụ abalị, ọnọdụ pụrụ iche nke na-eme ka ọgụgụ anyị ka mma n'abalị. Na-aga n'ihu na nke dị n'elu, Ọnwa + Reader emeela ọnọdụ nke na-agbanwe nhazi nke mbadamba nkume ka anyị wee nwee ike ịgụ ogologo oge na-enweghị emetụta ahụike anyị.
Ọnwa + Reader na Caliber, ihe ọzọ na-adọrọ mmasị
Ma eleghị anya, ihe kasị dị ịrịba ama nke Ọnwa + Reader bụ na ọ na-eme nke ọma na Caliber na anaghị m ekwu maka akụrụngwa, mana ngwa ahụ. Ma Pro version na nkịtị mbipute nke Ọnwa + Reader na-enye anyị ohere ịmekọrịta ma na-emekọ ihe na Caliber, ya mere ọ bụrụ na anyị nwere ihe nkesa na Calibersite na Ọnwa + Reader na mbadamba nkume anyị ma ọ bụ ama anyị nwere ike iji ọbá akwụkwọ Caliber. Ọ bụ atụmatụ ole na ole ịgụ akwụkwọ nwere na nke ahụ na-ewu ewu, ebe ọ bụ na ọ na-enye anyị ohere ịnweta ụlọ ahịa anyị n'ịntanetị na-akwụghị ụgwọ ọ bụla.
Ọtụtụ n'ime unu maara nke ọma na ngwa a na ọtụtụ ndị ọzọ ga-eji ya, mana You maara ọrụ ọnwa + Reader na Caliber? You mara ngwa ọ bụla yiri ya nke na-enye anyị ohere ịmekọrịta na Caliber?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » Hardware » ndị na-agụ akwụkwọ » Ọnwa + Reader, ngwa ngwa zuru oke
Ndewo, kedụ ka m ga esi esi mekọrịta ọbá akwụkwọ caliber m na agụ ọnwa?
Enwere m ọba akwụkwọ caliber dị na ndekọ ndọnye, kedu ka m ga esi mee ka akwụkwọ m pụta na ọba akwụkwọ ọnwa m n’ebughi ibudata ha na mbadamba nkume? (naanị otu onye m na-agụ)
Kedụ ka m ga-esi me ka ọgụgụ olu rụọ ọrụ
olu olu bụ nanị dị na ugwo version.
Nyochaa nke Sony eReader ọhụrụ: Sony PRS-T3
Ndi eReader anyị nwere ike ịrịa nje virus kọmputa?